Iwu Iwu Cannabis na Iwu --tụ Iwu - Isi Ochie nke Illinois Jiri Iwu Marijuana
Gini bu Iwu Cannabis na Usoro Iwu?
Illinois gafere Iwu Iwu na Taxtụ Iwu Cannabis na Mee 31, 2019. Ọ webatara ụkpụrụ nchịkwa cannabis na usoro ụtụ isi na-achọ idozi ihe ọjọọ nke agha ọgwụ na Illinois. Ọ bụ usoro iwu wii wii nke ukwuu na-edobe n'ọma ahịa maka obere azụmaahịa na ịha nhatanha n'etiti ọha na eze.
cannabis na-achịkwa na ịtụ ụtụ
Anyị ji nkenke oge kpuchie ngalaba ndị bụ isi, nke a na-akpọ Isiokwu, nke Iwu Cannabis na Iwu Tax. Lee Ihe ndi anyi g’abomiri;
Nkeji edemede 1: Isi edemede, Nchọpụta & nkọwapụta;
Nkeji edemede 5: Ikike
Nkeji edemede 7: Nha nke Ọha na Ọha
Akụkụ nke 10: Ojiji nke onwe
Nkeji edemede 15: Nhazi .hazi
Nkeji edemede 20: Centlọ ọrụ ọkụkụ
Nkeji edemede 25: Pilot Cannabis Pilot Programme maka Community College
Nkeji edemede 30: Ndị ọrụ aka
Nkeji edemede 35: Na-ahazi Ndị Ọchịchị
Nkeji edemede 40: Ndị na-ebugharị njem
Nkeji edemede iri anọ na ise: Iwu na ikike
Nkeji edemede 50: Labs & nnwale
Nkeji edemede 55: Usoro nile
Edemede 60 & 65: iletụ ụtụ na Extụ Isi
Nkeji edemede 900: Ndozi
Nkeji edemede 999: Ndi ozo
Ojiji ọhụrụ ndị okenye na Illinois ji Marijuana (cannabis nwere ihe karịrị 0.3% THC) siri ezigbo ike ma chọọ ọtụtụ okwu. onye ọka iwu azụmaahịa na ahụmịhe ụlọ ọrụ cannabis nwere ike inyere ụlọ ọrụ gị aka ito, nyefee ma ọ bụ nkesa.
Edemede nke Iwu Cannabis na Iwu Tax na Illinois
Ndị omebe iwu nke Illinois gafeela iwu ndị okenye maka iwu cannabis, dịka ị hụrụ nke ahụ bụ oge na-ewe oge na-adịgide na nnọkọ omebe iwu niile site na isi na mbụ nke afọ ruo mgbe nnọkọ ahụ kara aka na May 31, 2019. Ugbu a gọvanọ bịanyere aka na ụgwọ - mgbe ahụ usoro ịme iwu amalite. A ga-enwe akwụkwọ ewepụtara na Ọktoba 2019. Anyị ga-atụle nke ahụ na vidiyo akọwapụtara na post anyị ga-eme n'isiokwu ahụ.
Iwu nke Cannabis Iwu na Taxtụ Iwu agabigala edemede 999. Ma ọ malitere site na iji mkpọchi aha mee ihe tupu mmezigharị niile nke nwere ike na-agafe 5s dịka ego na-eme. Ka anyị gafee ihe dị iche iche dị n'iwu:
Nkeji edemede 1: Nchọpụta Isi na Nkọwa dị mkpụmkpụ. Nke a bụ edemede dị oke mkpa nke na -emepụta “usoro nka” na iwu ọhụrụ nke Illinois gbasara iji ndị okenye na-eme cannabis, ụdị kachasị nwee 0.3% nke THC.
Nkeji edemede 5: ikike - N’ebe a na-ebo ngalaba Ag aka ka o gbasaa (ugbua nwere osisi niile) - wii wii ọgwụ, hemp na ulo oru ngwa ngwa.
Nkeji edemede 7: Hara nhatanha na Cannabis - Mgbakọ ịkpọ aha dị iche iche - Atụmatụ Nsonye Mmekorita Social - Nke ukwuu
Nkeji edemede 10: Jiri nke Cannabis na - eme m ka m chee ma ọ bụrụ na agbakwunye ego ọha na eze mgbe ụgwọ mbụ ahụ gasịrị - ma ọ bụ ikekwe ha chere na 7 nwere ihu ọma - ojiji nke mkpụrụ ndụ. Nke a gafere ụlọ etolite - ọ na-aga ịkpa oke, ntaramahụhụ maka ịda iwu ma ọ bụ iji ya akwadoghị, ụgwọ onye were ya n'ọrụ, yana ebumnuche amụma.
Nkeji edemede 15: Mkpesa ọgbakọ - ndi mbu ga - abia ndi oru ahu ike ma hazie mmemme.
Agaghị agha ụgha nke a bụ nnukwu akụkụ amalite na peeji nke 63 - na-agwụ na peeji nke 162 - 100 peeji nke na nkesa - 75 ka Mee 2020 - na 110 ruo na njedebe nke 2021
Nkeji edemede 20 - ebe a na-akụ ahịhịa, Nke gbachiri afọ maka ị mariụ wii wii, ị nwere ike ịnwe rue 30 ka ọnwa Juun nke afọ 2021 dị ugbu a.
Nkeji edemede 25 - usoro mmemme ịnwale ụgbọ ala kọleji obodo - ịbịa maka afọ ụlọ akwụkwọ 2021-22. Nlele na Asambodo Cannabis
Nkeji edemede 30 - Ndị Ọkpụkpụ - ebe ezigbo ọrụ maka ndị na - azụ obere azụmaahịa bụ 40 maka July 1, 2020. Enweghị M&A ruo mgbe ọnwa iri na abụọ na ụbọchị iri abụọ na abụọ, n'afọ 21 - dị ka enwere oge iji kwado maka ebili mmiri M&A na 2021 na afọ. Ọzọ 2022 nka na-etolite a ga-enye maka Christmas 60 nwata Ọ na-adị ka 2021 ga-abụ afọ nke afọ na Illinois. Oge ahụ, ọnụọgụ ahụ nwere ike ịbawanye elu, mana agaghị aga karịa 2022. Nke a bụ ngalaba ọzọ dị ukwuu nke iwu anyị ga-ekpuchi n'oge ọkọchị - ma kpọọ uche gị gaa na ngalaba nke abụọ na peeji nke 150
Nkeji edemede 35 Infuser otu - site na nyocha m, nke a dị ka ikikere nke ndị na-eme nyocha. Ọ bụrụ na i mee “infusion” - “ikikere ihe eji arụpụta ihe” pụtara naanị ihe dị 2x n'iwu yana nkea. Inftù na-enye aka na-enweta akwụkwọ ikike ahụ. Agbanyeghị, ọ dị ka enwere ọdịiche dị na nhazi iji wepụta ihe, na ịnye ihe mmịpụta ahụ n'ime ihe ọzọ dị ka nri.
Nkeji edemede 40 Na-ahazi Organigbọ njem - Obere ihe na-akwụ ụgwọ maka nke a - ikikere ndị a niile na - akpọ ka ịnweta atụmatụ azụmahịa gị niile na akwụkwọ ụlọ ọrụ - dị ka atumatu nchekwa, ụkpụrụ iwu ike, atumatu na òtù dị ka ọtụtụ azụmaahịa anaghị eme. Yabụ mgbe ndị mmadụ na-ajụ m ego ole iji nweta ya - nke ọma - nke ukwuu. Chọrọ atụmatụ, a ga-enwe ndị na-ahụ maka ịrere gị gị - cheta ka ị jụọ ha ma ha nwere ọrụ aka gị na ụlọ ọrụ gị - ha anaghị eme
Nkeji edemede 45 mmanu na mgbochi
Nkeji edemede 50 - Labs na ule - ka anyi chee na odighi ike wii wii maka ogwu ka abawanye
Nkeji edemede 55 - ndokwa niile - ichikota, iwu mbibi - mpaghara amachiri cannabis - ime mkpebi - ezigbo nkwekọrịta, nwere ike mebie usoro nkwuputa ego.
Isiokwu 60 & 65 ụtụ isi - nke ahụ bụ ihe dị ụtọ na anyị ga na-emebi ebe dollar ụtụ isi na-aga na kọlụm paịiti na-ede ya, echere m na anyị ga-eji nkwonkwo dochie achịcha ahụ na eserese anyị.
Nkeji edemede 900 - Ndozi - nnukwu wụlikan na mgbakọ ebe - yana ngalaba kachasị ogologo - ị na-ahụ, ọtụtụ iwu kwesiri ka emezigharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị peeji atọ dị na mmezi ahụ.
Na ngwụcha, edemede 999 - ihe dị iche iche - mmeghari okwu na mmezi ụbọchị
Yabụ na iwu ahụ, kedụ ihe ọ pụtara? Idenye aha na ọwa isonye na ndi otu anyi no na facebook na iwu okike ndi mmadu na ndi oma ka anyi gaa na 2022 mgbe cannabis ga adiwanye ututu ma M&A abia na ya.